Odayaasha Beesha Mudulood oo ka biyo diiday inay ka qeyb-galaan xafladda caleemo saarka ee Ugaaska Beesha Xawaadle (AKHRISO SABABTA) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Odayaasha Beesha Mudulood oo ka biyo diiday inay ka qeyb-galaan xafladda caleemo saarka ee Ugaaska Beesha Xawaadle (AKHRISO SABABTA)
Odayaasha dhaqanka Beesha Mudulood ayaan kasoo qeyb galin xafladda caleemo saarka Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo haatan ka socota magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Arrintaan ayaa la sheegayaa inay ka dambeysay kadib markii Odayaasha dhaqanka Beesha Mudulood ay Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan ka sheegteen inuu ka galay khaladaad aad u badan.
Imaam Maxamed Yuusuf Cali, Malaaq Cali Maxamed iyo sidoo kale Ugaas Maxamuud Cali ayaa sheegay in Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu ka galay khaladaad badan oo ay ugu weyn tahay inuu diiday soo dhaweyntooda xilli ay booqdeen magaalada B/weyne sanadkii 2016 bishii Maarso.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa xilligaasi laga dalbaday inuu raali gelin ka bixiyo, balse uu jawaab ka bixin waayay.
Ilo-xog ogaal ah oo ku dhaw Ugaasyadda Beesha Mudulood ayaa inoo xaqiijiyay in xiriirka labada dhaqan beelood uu maraayo halkii ugu xumaa ebid, waxaana Ugaas Xasan Ugaas Khaliif lagu tilmaamaa nin ad-adag islamarkaana uu hadalkiisu qayaxan yahay.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh oo isku dayay inuu Odayaasha dhaqanka beesha Mudulood ku cadaadiyo ka qeyb galka caleemo saarka Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa ku guul dareystay kadib markii Odayaasha Mudulood ay ka diideen ka qeyb-galka xafladaasi oo haatan ka soconaysa magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaan ayaa la dhihi karaa waa mid sii cakiri doonta dadaalkii lagu doonayay in maamul loogu sameeyo gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, waxaana Ugaas Xasan Ugaas Khaliif lagu tilmaamaa inuu yahay shaqsi hadalo ad-adag oo qaarkood ay dhibaatooyin badan abuureen, waxaana ka mid ah inuu had iyo jeer wax ka sheego gobolka Sh/dhexe, taas oo Odayaasha Beesha Mudulood ay si aad ah uga caroodeen.